Noocyo kala duwan | November 2019
Ugu Weyn Ee Noocyo kala duwan
Noocyada xayawaanka beertaada
Waad kala hadli kartaa waxtarka cirifka: waxay hagaajin kartaa dheecaanka caloosha, wuxuu saameynayaa cadaadiska dhiigga, waxaa loo isticmaali karaa sida calool jilicsan, iyo qaabka xabuubka - si looga saaro kolestaroolka. Dhamaanba waxaad ka hadli kartaa noocyada kala duwan ee plomme. Si kastaba ha ahaatee, maanta waxaan isku dayi doonaa inaan diirada saarno kaliya noocyada ugu caansan.
Rifeyaha shaashadda: sharaxaadda iyo talooyinka koritaanka
Boorash boodh ayaa ah geed, beerashada oo aan keenin dhibaatooyinka kaliya, laakiin sidoo kale raaxada ah ee ka fikiraya goosashada. Berriga oo kordhay bisha Agoosto, qaddaradu waa weyn yihiin, hilibka berry waa mid casiir leh, dhanaan-macaan. Plumbada fangaska ayaa ku habboon ma aha oo kaliya isticmaalka, laakiin sidoo kale loogu talagalay soo saarista ilaalinta kala duwan ee it.
Doorashada noocyada ugu fiican ee plomme Shiinaha
Shiinaha Shiinaha ee jardiinooyinkeena waa dhif. Si kastaba ha ahaatee, waa adkaysi u dhaxan, dhirta midhuhu ka dhaqso badan kuwa kale oo siinaya dhalid sare. Dhammaan noocyada waa wax asalka ah, waxaannu u soo bandhignay dareenkaaga liiska noocyada ugu caansan ee plomme. Alenushka Sort Alenushka waxaa la helay iyadoo la marayo noocyada kala duwan Red Ball iyo Girl Chinese.
Kusoo dhawow noocyada caanka ah ee tubta jaalaha ah
Plum - waa mid ka mid ah geedaha midhaha ugu caansan ee dalkeenna. Dhirta sare ee warshad aan qabyo ahayn iyo dhadhanka aan dhicin ee miraha waxay keeneen caan weyn. Thanks to dadaalka ah ee jilayaasha, tubta ayaa helay beelo kala duwan oo soo jiidata dhadhan aan caadi ahayn iyo caraf udgoon.
Noocyada Bisaylkiisa Hore "Honey White" waxay ku kala duwan yihiin wax-soosaarkooda sare, miraha waaweyn ee waaweyn oo leh dhadhan macaan oo macaan iyo caraf udgoon. Kala duwanaantu waxay caan ku tahay beeraley badan oo ka baxsan dalka. Aan u falanqayno shuruudaha aasaasiga ah ee geedkan si loo beerto iyo daryeel. Taariikhda beerista ee "Honey White" Plum-ka ah qoraaga noocyada kala duwan ayaa ka mid ah saynisyahanada Donetsk ee Machadka Beeraha Beeraha, UAAS, sharraxaadda Fiisooyinka ee Ukraine Liliya Taranenko, oo ka soo jeeda 66 sano oo ka mid ah da'da weyn waxay ku qaadatay 62 sano oo ka shaqeyneysa Xarunta Artyomovskaya Experimental of Nursery.
Goobta "Anna Shpet" waxay u dhigantaa rikoodhka dalagyada beerta marka la eego wax soo saar. Sannad kasta waxay bixisaa bannaanka dhadhan fiican leh, midab leh iyo midab casiir leh, taas oo lagu isticmaalo guul weyn oo loogu talagalay wax soo saarka suxuunta kala duwan, diyaarinta xilliga qaboobaha ama sida xayawaan madaxbannaan. Taariikhda taranta Qoysaska kala duwan ee guryaha "Anna Shpet" ayaa markii ugu horreysay laga helay qarnigii XIX, 1870.
Dhammaan waxyaalaha ugu muhiimsan ee ku saabsan kala duwan ee plomme "Bogatyrskaya"
Plum ma aha oo kaliya dukaanka alaabta waxtar leh, laakiin sidoo kale alaab aad u dhadhan fiican leh. Sidaa daraadeed, ninkii beerta ka shaqeeyaa wuxuu dooranayaa geed miro ah oo beertiisa ah, wuxuu doonayaa in uu ku farxo isaga oo leh dalag wanaagsan oo badan intii suuragal ah. Kalluumeysatadu waxay daryeeli karaan wax soo saarka. Waxay ahaayeen kuwa keena noocyo kala duwan oo isku dhafan oo isku dhafan oo ka sameysan guryaha la yiraahdo "Bogatyrskaya".
Bacaha wanaagsan waxaa jira marwalba dhowr nooc oo plomme ah. Tani ma aha mid la yaab leh, sababtoo ah dadku waxay midho dhaliyeen in ka badan boqol sano. Inta lagu jiro wakhtigan, in ka badan saddex boqol oo nooc oo ah geed geed ayaa u muuqday. Oo ma aha meesha ugu dambaysa ee taxanahan waa tubta Mirabel. Tilmaamaha Botanical Mirabel waa koox ka mid ah noocyo of plom ah oo ku koraan geedaha koritaanka dhexdhexaad ah, leh xidid ah qaab ah ul iyo a jilif-grayish on jir iyo laanta.
Dhamaan kuwa ugu muhiimsan ee ku saabsan noocyada tubta "madaxweyne"
Qurxinta quruxda badan iyo beerashada - riyo ah xagaaga oo dhan. Sidaa darteed, geedaha lagu beero goobtaada waa in si taxadar leh loo doortaa, sidaa daraadeed marka dambe ma jirto wax aan caadi aheyn. Maanta waxaan ka hadli doonaa xajmiga, noocyo kala duwan oo loo yaqaan "madaxweyne". Muxuu geedku u egyahay, astaamaha dabiiciga ah ee kala duwan ee xayawaanka ka soo jeeda dadka kale, iyo sidoo kale sida, meesha iyo goorta geed lagu beero iyo sida loo daryeelo noocyada kala duwan, waxaad ka baran doontaa maqaalkan.
Dhammaan waxyaalaha ugu muhiimsan ee ku saabsan noocyada tubta "Angelina"
Geedaha dhirta caarooyinkayaga sida geedka sida tubta waa caan. Plum waa caleemaha oo dhan dhirta miraha dhagax, tirinta dhowr subgenera, iyo subgenus kasta tiro badan oo kala duwan. Laakiin si aad u doorato geed miro ah, waa ku filan in la ogaado sifooyinka noocyada kala duwan ee ay ka mid tahay. Sidaa darteed, in this article waxaan tixgelinnaa sifooyinka dabeecada ee tubta "Angelina".
Dhammaan waxyaalaha ugu muhiimsan ee ku saabsan koritaanka arooska "Pissardi"
Plum ma aha oo kaliya warshad miraha ay leedahay dhadhan aad u qurux badan oo ay ku jirto maaddo cajiinka ah oo loogu talagalay samaynta macaanka kareysa ee xilliga qaboobaha. Waxa kale oo ay samayn kartaa hawlo qurxin ah oo u adeegsanaysa qayb ka mid ah naqshadeynta muuqaalka muuqaalka. Gaar ahaan haddii uu yahay caleen caleen ah "Pissardi". Noocani wuxuu soo jiitaa dareenka ubaxa asiga ah iyo midabka caleen, taas oo siin doonta dhadhan gaar ah beerta, beerta, beerta ama cawska.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Noocyo kala duwan 2019